Kedụ ka ụgbọ njem ọha na-anọ na Istanbul maka ụbọchị anọ? Obodo Metrobus na Ferry na-arụ ọrụ? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKedụ ka ụgbọ njem ọha na-anọ na Istanbul maka ụbọchị anọ? Obodo Metrobus na Ferry na-arụ ọrụ?
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, tram
Kedu ka igwe obodo, metrobus na mmanụ si agba ọsọ na Istanbul n'ehihie?
Oge mgbochi a, ekwuputara n'oge oge n'ihi oria ojoo nke Covid-19, ga-adịkwa n'ọrụ site na 16 ruo 19 Mee. N’ebe ndị bi n’obodo Istanbul nọrọ n’ụlọ ha na-esochi usoro iwu amachiri maka ụbọchị 4, ọtụtụ n’ime ndị ọrụ ntanetị İBB na ndị enyemaka ya ga-aga n’ihu n’ọrụ ha n’enweghị nsogbu ọ bụla, iji mee ka obodo ahụ nwee udo ma rụọ ọrụ n’esepụghị aka. N’inwe ohere iji rụọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma n’okporo ụzọ obodo na n'okporo ụzọ ndị amịpụtara n’oge gara aga, IMM ga-enwe ohere iji rụchaa ọrụ ọ na-arụ n’ime ụbọchị anọ na-esote ngwa ngwa.
N'ime oke nke ọgbaghara oria ojoo nke Covid-19, Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) ga-aga n'ihu na ndị bi na Istanbul na ndị ọrụ 16 n'oge ngwụsị nke ụbọchị anọ, nke ga-adị n'etiti 19-4 May. Na mgbakwunye na mkpa ndị dị mkpa dị ka njem, mmiri, gas sitere n'okike na achịcha, İBB, nke ga-aga n'ihu na ọrụ nchekwa ya na nri ya na steeti mkpụrụ osisi, nlekọta ndị agadi na ndị nwere nkwarụ, ọrụ olili ozu, mkpofu ahụike na ihe mkpofu siri ike, otu ndị na-ahụ maka idebe ihe mkpanaka, ALO 11, ọrụ saịtị, agaghị efu efu. N'ime oge a na-ekwupụta n'oge, Oge IM nwere ohere ịrụcha ngwa ngwa n'ihi ọganihu nke ọrụ ụgbọ ala na okporo ụzọ dị egwu, n'ihi mkpọda okporo ụzọ na n'okporo ụzọ obodo. le İSKİ KadıköyNa Seyit Ahmet Creek, a ga-arụ ụfọdụ ọrụ n'ụsọ osimiri Ortaköy tupu oge a ga-agwụ agwụ ma aga etinye ya n'ọrụ na njedebe nke June.
GAGH EX KWESPR IN INBARA NA NKWUKWU EGO NA-EKWU NA AHALH HE
Ndị otu ọcha ọcha nke Ngalaba Ahụike IMM ga-aga n'ihu na-eme ọcha ọcha na ụlọ ọrụ ọha na ụlọ ọgwụ. Maka ọgwụ ndị dị na mpụga, ndị ọrụ 10 ga-eji ụgbọ ala gaa n'ihu ruo ụbọchị 5 na ụgbọala 4, maka mgbochi ime ụlọ, ndị ọrụ 64 ga-eji ụgbọ ala 30 gaa ọrụ ha na Satọdee, Sọnde na Mọnde. Iji lụsoo anwụnta kpatara ọkụ ihu igwe na-akpata, ndị ọrụ 412 ga-arụ ọrụ ịgba akwụkwọ n'ofe obodo na Mọnde.
İBB, nke ga-aga n'ihu na ọrụ nlekọta ahụike ụlọ ya na Mọnde na Tuzdee, ya na ndị ọrụ 182 na ụgbọ ala 69, ga - arụ ọrụ Community Mental Health Services na ndị ọrụ 15, ndị isi mgbaka 3 na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ 76 maka ụbọchị 4.
EGO EGO ISPARK PARKing
İSPARK a ga-emechi ebe niile maka ụbọchị anọ. Agbanyeghị, iji zere ihe isi ike ọ bụla n’ụbọchị mmachibido iwu ahụ, ndị ọrụ ISPARK 4 na ngụkọta, gụnyere Isi ụlọ ọrụ, Openfọdụ Oghere Mmeghe na Storey Car Park, Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye na Tarabya Marina, Bayrampaşa Vegetable-Mkpụrụ Mkpụrụ na Market na Akwụkwọ nri. ga-arụ ọrụ.
ISKI AKA BARA N'ALAEZE EGO EGO
Na oge mgbochi, İSKİ nwere ohere iji rụọ ọrụ ọfụma karịa n'ihi ụgbọala siri ike na okporo ụzọ mmadụ. Oru ngo a, nke aga-emecha n’ogologo oge, na-aga n’ihu n’enweghi nsogbu nke oma n’okporo uzo na izu ike. N'okpuru mmachi ụbọchị anọ, İSKİ ga-arụ ọrụ ya na mpaghara 4 dị iche iche na Istanbul na mmiri mkpofu, mmiri mmiri, mmelite iyi na mmiri ọ ,ụ drinkingụ, na ndị ọrụ 5.
EGO NA-EGO İSKİ Ga-arụ ọrụ
N’akụkụ nke Anatolian;
Pendik Ankara Caddesi (Sabiha Gökçen Airport Road), Kartal Meydan, Kartal Cengiz Topel Caddesi, Kartal Karlıktepe, Kadıköy Dochie, Kadıköy E-5 Underpass, Kadıköy Dinlenç Creek, Üsküdar Beach, Üsküdar Square, Üsküdar Libadiye Caddesi, Ümraniye Tantavi Tunnel, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Beykoz Ali Bahadır Creek, Ataşehir Libadiye Caddesi, Tuzla Birlik OSB.
A GA-AKWITYKWỌ ,BỌCH,, AHEDMAT AND MAKA Ọ NA-EKWU NA NKWU
İSTAÇ, ịsa ahụ, ịsa ahụ ọfụma na ịza aza n’iru ọha dịka isi okporo ụzọ, ogige, Marmaray na ụzọ mbata ụzọ, ụzọ gafere - okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ ala / nkwụsị, Bayrampaşa na Ataşehir States, ụlọ ọgwụ, na ụlọ ọrụ ọha na ụlọ ọrụ dị iche iche. ga-aga n’ihu ịchafụ aka ruo ụbọchị 4 n’akwụsịghị akwụsị.
N'ime ọrụ nhicha ahụ nke İSTAÇ ga-arụ maka ụbọchị anọ, a ga-emebi mpaghara nke 4 nde 2 puku 162 square (ogo nke 580 football filin), na mpaghara 303 nde 16 puku 555 square (ihe dị ka nha nke 80 puku 2 bọọlụ bọl) ga-asacha site na iji ngwa ọrụ jiri ya. .
ỌR. EGO EGO
İSTAÇ, n'oge mmegharị ụbọchị na Mee 16-17-18-19, ga-asa okporo ụzọ dị n'ili na gburugburu ya n'okpuru Ngalaba CBB, nke dị mma maka ọrụ ịsa ahụ, ọ ga-ekenye ndị otu aka iji sachapụ ebe ndị ụgbọ ala na-agaghị abanye. Na ngwụsị nke ụbọchị 4 ahụ, ụgbọ ndị ahụ ga-abụ ugboro 141 ma ndị ọrụ 416 ga-anọ n'ọrụ.
Ngwongwo ahihia na oru
N'akụkụ Eshia na Europe, ihe ruru pesenti 245 nke ọgwụ, gụnyere mkpokọta iche iche iche, site na ndị ọrụ 4 ga-anakọta, were ụbọchị anọ gafee. Ndị ọrụ 323 ga-arụ ọrụ maka mkpofu. Onu ogugu ndi gha eme njem ga diri ubochi ano ga adi puku isii ma obu puku asaa.
Ọ D PRGHAT ụdị ọnwụnwa
İGDAŞ ga-arụ ọrụ na puku ndị ọrụ puku anọ, puku 7 na oge ọrụ, ọkachasị 24/187 Ndị ọrụ nzaghachi Mberede, 4 Natural Gas Emergency Telephone Line Center na otu egwuregwu, iji nyefe ikuku gas n'akụkụ niile nke Istanbul n'enweghị nsogbu na enweghị nchebe.
IPM SHAKA agaghị aba ụba
Ọ ga-arụ ọrụ 621 ndị ọrụ na Lines City, ụgbọ mmiri, ndị na-ebu njem na hipgbọ mmiri Haliç. N’ụbọchị anọ, a ga-ebu ụzọ ụgbọ njem 4 na berth 15, n’ụgbọ mmiri iri na ise, ụgbọ mmiri iri na otu.
Usoro nke ijere ozi:
Inyekwụbanye-Çubuklu Ferry Line.
NZUZU A NA-EKWETA
IETT ga-eme njem puku iri anọ na anọ na narị anọ n’ime ụbọchi anọ. A ga-ekenye ụgbọ ala 4 maka ụlọ ọgwụ ọha na eze na nke 42.
Ekpebiri ya itinye usoro iwu oge maka ụbọchị 4, Satọdee, Sọnde, Mọnde na Tuzdee. Ọtụtụ ụmụ amaala, dịka ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọha, ndị ọrụ ahụike, ndị ọrụ ọgwụ, ndị na-eme achịcha, ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha n'oge ụbọchị mmachi. IETT ga-aga n'ihu n'ime ụgbọ elu ya ruo mgbe elekere 01 nke abalị Wednesday maka ndị Istanbul na-aga ọrụ. N’ụbọchị abụọ nke izizi, ya bụ, na Satọdee na Sọnde, a ga-enwe ụgbọ elu 00 nwere ụgbọ elu 494 ọbụladị 488. Na Mọnde na Tọzdee, a ga-ahazi ụgbọ elu 8 358 nwere ugbo ala 494 ọbụladị 512. A ga-edobe ụgbọ ala ndị dị ize ndụ maka arịrịọ ozugbo na ahịrị ndị ahụ, ọ bụrụ na a chọọ, a ga-eduga ha n'ahịrị ndị dị mkpa.
N'ịgbakwunye, a na-ekenye mkpokọta ụlọ ọgwụ nke onwe na nke ọha ọha 4 maka ụbọchị anọ nke mmachi ahụ. Ngụkọta nke ugbo ala 91 ka enyere ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ozi na Saturday, Sọnde, Mọnde na Tuesday.
N’ahịrị Metrobus, ha ga-enwe nkeji 06 n’agbata elekere isii nke ehihie ruo elekere iri nke Satọdee na Sọnde. A ga-aga njem n’agbata 10 na 3 n’ime nkeji iri ọ bụla. Ọzọ, n'agbata afọ 10 na iri abụọ aga njem ọ bụla n'ime nkeji 16 ọ bụla. Gbọ elu site na 10 ruo 16 ga-eme 20 nkeji.
Na Mọnde na Tuesday, a ga-enwe ụgbọ elu nkeji atọ ọ bụla n'agbata elekere isii ruo elekere iri nke iri ọ bụla, nkeji iri ọ bụla dị n'agbata 06 na 10, nkeji atọ ọ bụla dị n'agbata afọ iri na isii na iri abụọ, na nkeji iri ọ bụla dị n'agbata 3 na 10.
Oge oge Mee 16-17 Mee 18-19
06: 00 - 10: 00 Nkeji 3 Nkeji 3
10: 00 - 16: 00 Nkeji 10 Nkeji 10
16: 00 - 20: 00 Nkeji 3 Nkeji 3
20: 00 - 00: 00 Nkeji 15 X
20: 00 - 01: 00 X Nkeji 10
LIVE BROADCAST SITE BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
N'ime oge elekere anọ nke ụbọchị, Boğaziçi Yönetim AŞ ga-anọ n'ọhịa na ngalaba ọrụ İBB, ndị mmekọ na mpaghara ndị bi na Istanbul na-eji, yana otu mmadụ 4 nwere ndị ọrụ aka na nhicha.
Na mgbakwunye, maka ndị nne na nna ga-anọ n'ụlọ n'ihi mmachibido ahụ, Ọkachamara Ọkachamara Ọkachamara Ceyda Website ga-ezute ndị na-ege ntị na mkparịta ụka nke ọdịnaya "Childrenmụaka na nchịkwa nchegbu n'oge nje oria" na mgbasa ozi ndụ site na akaụntụ Boğaziçi Yönetim na Sunday na 16: 00.
ỌR WOR ỌR WOR NA-EKP WR CON GAR .R
İSTON, Hacı Osman Grove, nyocha ala, Kadıköy Kurbağalıdere Yogurtçu Park Okirikiri ụlọ ma nwekwaa oghere n’etiti Moda, Atatürk Olympic Stadium landscaping, Beylikdüzü na Avcılar pedestrian na-agafe mmezi na idozi ya, Greater Istanbul Bus Terminal pavement ndokwa, Göztepe Metro Station, Kağıthane Metro Station Entrance Pavement Arrangement, Giyimkent Street-tem Side Uzo eji eme njem, ihe nlekota nke okporo uzo, okporo uzo ugboala, nke ndi njem, IETT Garage and Havaist Platform Areas Arrangement, Aycice Street Concrete Pavement Construction Work, Saltuk Ọrụ a na-arụ n'okporo ụzọ Buğrahan Street, Bağlar Caddesi Ihe Mpempe Ewu, Şamlar Caddesi na-eme njem, ılọ mgbidi ızdereiçi, Beylikdüzü Cemevi paịlị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na saịtị obodo.
A ga-arụkwa ọrụ na ndozi na ndozi nke ogige dị iche iche ụmụaka na-anọ n'okpuru nduzi nke ogige na ubi. N'ime usoro a, ngụkọta ndị 779 ISTON na ndị ọrụ ala na-arụ ọrụ ga-arụ ọrụ. Na mgbakwunye, a ga-emepụta mmepụta n’enweghị nsogbu ọ bụla na İSTON Hadımköy na Tuzla factory n’agbata 16-19 Mee.
17 puku akwara 840 ụnyaahụ ngwa ngwa eji emechi emechi ngwa ngwa
İSFALT ga-anọnyere ndị ọrụ 853 maka ị na-arụpụta asphalt na mmemme ngwa asphalt na ndị ọrụ 260 maka imebi ihe.
Mmụta na usoro a; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar na Bakırköy. Onu ogugu 17 nke ngwa ahia ka emebere.
NIILE NA-EJI NA-EGO NA-EGO
Ugbo ala 270, ndi oru ugbo ala 270, ndi oru ndi ozo noo 270 na ndi enyemaka 270 ga-aru oru ibugara ndi umu aka anyi ndi choro enyemaka nke ndi otu Social Services duziri.
Gbọ njem, ụlọ ọrụ eletriki, ụlọ oriri na ọfectụ disinụ na ọrụ ọgwụ ga-aga n'ihu na ụbọchị iji wee nwee ike ịrụ ọrụ ọha na eze n'enweghị nsogbu ọ bụla.
EGO NA-EGO NA IFTAR
Supportlọ Ọrụ Nkwado Logistics ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ awa iri abụọ na anọ ehihie na abalị iji hụ na arụrụ ọrụ ọhaneze ọfụma na enwere ike ịkwagide ma jigide ọrụ ọha. A ga-akwado ma nri Iftar na Sahur ma nyefee ndị ọrụ nchekwa ọkụ 24 na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na kichin 7 ọkụ.
Ebe Nkwado Ngwa Ọrụ ndị ọzọ ga-aga n’ihu maka ụbọchị anọ bụ ndị a;
- 153 tebụl ọcha, Ngalaba ebe a na-eli ozu, ndị uwe ojii na ndị ọrụ niile na-ahụ maka ọrụ ka a ga-ekenye ha n’ebe ọrụ ha, iftar na iwu sahur.
- Mkpa nri na ihe ọ beụverageụ nke ụmụ amaala anyị nọ n'ogige na-enweghị ebe obibi ka aga-ezute.
- Iftar, ihe dị ka puku mmadụ iri ga-akwadoro maka mpaghara mpaghara chọrọ ya.
- A ga na-enye ndị ọrụ ahụike 32 na Zeytinburnu Social Facility ọrụ ụlọ obibi.
- A ga-egboro mkpa nri na ihe ọverageụverageụ nke ndị ọkachamara ahụike na-anọ na nkwari akụ.
ALO 153 24 UTUTU N’ANYA
Ebe a na-akpọ Alo 153, nke na-enye aka n'akụkụ niile nke Istanbul, ga-arụ ọrụ awa iri abụọ na anọ kwa ụbọchị na oge mgbochi. Onu ogugu ndi gha agha dika ndi ozo gha gha bu 24.
IMM ga-ahazi ihe mmemme nke 19 Mee na gburugburu dijitalụ n'ihi usoro ọrịa na mgbochi. A ga-ekerịta egwu sitere na akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta nke Ngalaba Ọdịbendị nke IMM n'etiti 16-19 May; A na-enyocha ihe nkiri, ihe nkiri na ihe nkiri na ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ ga - enyere ndị bi na Istanbul aka ị enjoyụ oriri nke ụlọ ha.
Usoro 4-DAY INTENSIVE IN SPORTS ISTANBUL
SPORTS ISTANBUL, na Mọnde, Mee, n’agbata elekere 18:21 na 00:22 @ ıbbsporistanbul ịtube ọwa na chess tv gịtube İBB Spor İstanbul Online Chess Tournament Final Night ga-agbasa na ọwa ya. Egwuregwu mgbasa ozi dị ndụ, onye egwuregwu chess ịtubeSabri Can ga-ekwu na onye nhazi Gürcan Engel na Talha Emre Akıncıoğlu. Na mgbakwunye, Renay Onur, onye isi njikwa nke Spor Istanbul, ga-abịa dị ka ọbịa.
Na Tuesday, Mee 19, na mmeghe nke Atatürk Kent Orman, ntinye nke ndị otu na-agba ọsọ na ndị egwuregwu mba ga-esonye na nkwado nke Egwuregwu Istanbul, iciplọ Ọrụ Istanbul Metropolitan Muns na Ogige Ubi maka ojiji nke mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọrụ ndị ọzọ ga-eweta site na ndị mmekọ -16BB na 17-18-19-XNUMX dị ka ndị a:
Achịcha Ọha Istanbul: Ọ ga na-arụ ọrụ zuru oke na ụlọ ọrụ 3, ihe nchekwa 514 na ndị ọrụ 364.
SYÖN AŞ: Ngwaahịa azụ mmiri Gürpınar na Kadıköy Ọ ga-eje ozi na ndị ọrụ 50 na Market Market.
SBAK AŞ: Ndị ga - aga agha na usoro ga - aga metro metrik, usoro mmemme, mmemme, ngwa, nrụnye na arụmọrụ ga - aga n'ihu ndị ọrụ 108.
Beltur AŞ: Hospitalslọ ọgwụ 40 ga-eje ozi na ihe ruru ndị ọrụ 55 na isi 400.
M İSTTELKO: Iji kwado usoro akụrụngwa nkwukọrịta niile na-enweghị nkwụsị, Data Merkei ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị, na ngụkọta ndị ọkachamara 10, 30 na ọrụ WIFI, 8 na ọrụ WIFI, 6 na ọrụ IT na 24 na ọrụ akụrụngwa.
STGÜVEN AŞ: N'ime oge ezumike ụbọchị 4, ndị ọrụ 5 ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ebe 860.
AĞAÇ AŞ: Dị ka akụkụ nke mmezi na nhazi mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Istanbul, ndị ọrụ 723 ga-eji ụgbọ ala 306 na-arụ ọrụ ha.
SPER AŞ: Icelọ ọgwụ, Ahụike Home, Ndị Ọrụ Ọha na ụzụ, Ndị uweojii, Nchọpụta na Ọrịa, İSKİ, Ọrụ nkwarụ, Ọrụ olili ozu, Ọrụ ụmụaka, ndị ntorobịa na egwuregwu, Mmekọrịta Ọha, Directorate nke steeti, Mgbapụta Hızır, İGDAŞ, Ndụmọdụ Ezinaụlọ na Educationlọ Akwụkwọ Ọzụzụ, Directo Direction. Ga-aga n’ihu na -eme ka ndị bi n’obodo Istanbul na Istanbul nwee puku ndị ọrụ ruru puku anọ na-arụ ọrụ na Familymụaka Ndị Ezinaụlọ, Orchestras na aterslọ Ihe nkiri, Ndozigharị Anmụ Anụmanụ ụmụaka.
Ngalaba Ili Ozu nke IMM: Ọ ga-arụ ọrụ na ihe ruru otu puku ndị ọrụ 245 na ugbo ala ọrụ 350 iji mee ka ọrụ kwụsịlata.
Bgbọ agha Ọkụ Istanbul: Ọ ga-eji ụgbọ ala 849 na ndị ọrụ 2 jee ozi.
Ndị uwe ojii IMM: N’oge ezumike nke ụbọchị anọ ahụ, puku mmadụ iri abụọ na atọ, ụgbọ ala 23 na ọgbakọ 483 ga-arụ ọrụ n’ụdị, n’oge adịghị anya. Ọ ga - eweta ọrụ n'ọtụtụ mpaghara site na njikwa ebe ọrụ kwesịrị ịnọgide na - emechi emechi ọnụ ahịa nke ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike.
Hamidiye AŞ: Ọ bụ ezie na mmepụta na mbupu na-aga n'ihu ruo ụbọchị 4, ụfọdụ igwe ga-emepụta na Mee 19. Ndị na-arụ ọrụ n'ọfịs; belụsọ ma ọ bụrụ na e nwere mkpa ngwa ngwa, oge ị ga-alọta agaghị arụ ọrụ n'ụbọchị ndị ahụ. Ndị ahịa 167 ga-aga n’ihu maka ụbọchị 263 na ụgbọ ala 760 na ndị ọrụ 4.
Ndi Metro na Ferry na-arụ ọrụ na ngwụsị izu na Istanbul?
Oge ole nke Transportgbọ njem Ọgwụ Izu na Istanbul ..? Metrobus, Bus,…
Busbus nọgidere n'okporo ụzọ ahụ ... Metrobus were ndụ ... Metrobus dị ka nke a, metrobus dị ka nke a, kedu ihe ọ bụ…
Kedụ Ka A Ga-egbochi Transportgbọ njem Ọha na Istanbul?
Okpukpo Uhie Na-eli ozu Cemetery 10 Ga-abụ Nanị Naanị N'ihe
Ụgbọ njem ndị mmadụ ga-enwe ohere n'oge Bayram n'oge Eskişehir
Bus Metro na Steamers na Istanbul maka Ramazan Bayrami
Ministri nke Transportgbọ njem gaa Channelbọchị Ọpụpụ Istanbul Mmemme
Agaghị arụ ọrụ ikuku ikuku na Bọọlụ ESHOT na IZULAS maka Ahụike
Usesgbọ ala obodo na Kocaeli kpuchie kilogram abụọ na mpe abụọ
ADARAY 10 Free n'ime ụbọchị
Ụgbọ njem niile na-aga n'ihu na nke IMM Free
Altepe kọwara: N'etiti okporo ụzọ Mudanya ga-etinye aka na njem njem ọha na eze, a ga-enwe eriri ụzọ